musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Seychelles Nhau » Yakachengetedzwa gastronomy muSychelles Islands
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Seychelles Nhau • Culinary • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Investments • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Parizvino mune yakajairwa Seychellois kicheni, yakasimba gastronomy inoita chinzvimbo chakakosha munharaunda yechiCreole kwete chete muSychelles asiwo pakati pevatsigiri venyika dzenyika dzakapoterera pasirese.
Seychellois vanoziva kwazvo kuti izvo zvigadzirwa zvinobva kupi, kuti chikafu chinorimwa sei uye kuti chinosvika sei kumisika uye pakupedzisira kumatafura avo.
Vashanyi vezvitsuwa vanotenga zvekudya zviri mumwaka uye kugadzirisa mamenyu avo zvichibva pane zviripo.
Kutenga zvigadzirwa zvitsva kubva kuvarimi vemuno zvinobatsira kuchengetedza purazi kune tafura yekutengesa.
Ichikurudzirwa nenhaka yadzo dzakasiyana, chikafu checreole chiri kuputika nemavhiri mazhinji uye maSeychellois vanoziva kwazvo kuti zvinobva kupi, chikafu chinorimwa sei uye chinosvika sei kumisika uye pakupedzisira pamatafura avo. Yakasimba gastronomy inotibvumidza isu kusarudza chikafu chine hutano kune zvakatipoteredza uye miviri yedu uye nhau dzakanaka ndedzekuti chero kwaunenge uri mupasi, iwewo unogona kubatsirwa nazvo.
Heano mashoma maitiro akaomarara aunogona kutora kubva kuchikafu chechikafu:
Zvichengete mwaka - Mhuri dzeSeychellois dzinoramba dzichiziva zvekutenga zvekudya zviri mumwaka zvinotungamira mukudya zvakaringana; izvi zvinosanganisira kudya chimwe chikafu uku chiri chizhinji, zvichibatsira kugadzirwa kwezvakatipoteredza pamwe nechikwama chako.
Iva anochinjika - Iva wakagadzirira kugadzirisa menyu yako zvichienderana nezviripo. Zvidyo zveCreole zvine dzimwe nzira dzakasiyana dzekuverengera kuwanikwa kwezvigadzirwa; izvi zvinodzivirira kukanganisa kwekugadzirwa kwechisikigo.
Yemunharaunda yakanakisa - Tora zvigadzirwa zvitsva kubva kumapurazi ako uye vagadziri uye uwane kuziva zvakawanda pamusoro pezvaunoisa mumuviri wako. Mune zvidiki Seychelles nharaunda, vagari vepazvitsuwa vanovaka hukama nemutengesi wavo wemuno, izvo zvinovatendera kuti vabvunze mibvunzo nezve zvigadzirwa uye kunyange kuwana matipi ekuti unganyatsoita sei kubva kwavari.
Sarudza zvekudya zvegungwa zvakagadzikana - Nekusvika padyo newaunopa iwe une zano riri nani rekuti vakashandisa nzira dzakaringana dzekuredza. Kuve nyika diki yechitsuwa, vabati vehove vazhinji vemuSeychelles Islands vanoshandisa nzira dzekuredza dzakadzikama uye vanoramba vari kure nekuredza kwakawanda uye vazhinji veko vane vatengesi vavo vanogara vachiita kuti zvive nyore kuita sarudzo dzakasimba.
Ziva nezvehove dzako uye sarudzo dzegungwa - Kunyangwe iri sarudzo ine hutano, dzimwe mhando dzehove dzakanyanyisa-hove uye dziri kudzikira muhuwandu. Usati watenga zvekudya zvegungwa, zvidzidzise pane kwavo kugadzirwa uye zvavanoda pamusika. Dzimwe mhando dzakadai semak lobster dzinoiswa pasi pemwaka wakavharwa kuti masheya akwanise kumutsazve. Seychelles Fishing Authority inoita kuti veruzhinji vazive nezve izvi ruzivo, vachivimbisa kuti Seychellois haikonzere kukanganisa iyo isina kusimba marine ecosystem.
Tenga chete zvaunoda - Pese pazvinogoneka, ita nzendo zhinji kumusika, gara nezvido zvako zvezuva nezuva kana zvevhiki pane kutenga zvakanyanya uye kurasa chikafu. Nemisika yemuno uye zvitsva zvinowanika pazvitsuwa zvese, zvave kuita zvakajairika munharaunda yeSeychellois kupopota nemusika wepedyo pazvinenge zvichidikanwa, zvichiita kuti zvive nyore kudzikisa marara. Zviri nyore kuziva kana vabati vehove vachingobata hove uye hove dzichangosvika pamusika, ruzha rwe 'lansiv' rwuchanzwika mudunhu rese
Deredza marara echikafu - Kunyangwe iri yechisikigo, chikafu chinotora chinguva kuora, kazhinji chichiunganidzwa mumatope, saka zvakakosha kudzora marara. Kuronga chikafu, kudzikisira kuwanda uye kushandisa zvizere marara kunogona kudzivirira zvisina basa marara echikafu uye kunyange kudzikisira mari yekuwedzera.
Shandisa zvizere zvigadzirwa zvako - Chikamu chekuderedza marara echikafu chiri kushandisa chakawanda sechigadzirwa chako sezvinobvira. Pachivanhu, Seychellois yakanga isina hunyanzvi hwekurasa chikafu; nokudaro, vaishandisa zvakazara zvavaigona kuwana, vachiwedzera zvinonhuwira kuti vagadzire madhishi anonaka.
Munopinda manyowa - Chero chimwe chinhu chisingashandiswe chinogona kugara chichifungidzirwa semanyowa. Mumhuri zhinji dzeSeychellois, unogona kuwana bhegi remanyowa, iro rinogona kushandiswa mubindu, rakazadzwa nemarara ezvekudya kubva pamichero, miriwo, zvigadzirwa zvemukaka, mupunga, bhinzi, mahove emazai, zvigadzirwa zvegorosi, zvigadzirwa zvemiti nemaruva, tii uye kofi zvigadzirwa. Kumbira maneja wako wekugara kuti uripapi murwi wavo wemanyowa uye maitiro ekurasa marara.
Kunaka-kumba - Unogona kuve nezvigadzirwa zvitsva pamba, ingo pop pamusika wako kuti utenge zvinodiwa uye unogona kuva nebindu rako diki kwaunogona kudzora zvinowedzerwa pamichero nemiriwo yako. Imba yega yega yeSeychellois ine gadheni rimwe chete diki kana kunyange hari diki dzakamisikidzwa dzakatarisana nepahwindo nezvibereko uye nemiti inonhuhwirira mukati mekusvika kwako, tsika isina kupera kusvikira nhasi.
Rongedza mapurasitiki uye dzokororazve - Dzivisa kushandisa mapurasitiki pese pazvinogoneka uye dzokorodza. Mapindu akatenderedza zvitsuwa akazadzwa nezvinhu zvakagadzirwazve zvakaita sepurasitiki nemakani, ayo ave kushanda sehari dzekurima mishonga yemuno, michero nemiriwo.